Fahazoana rongony New Jersey | Ahoana no fomba ahazoana iray - Dispensary vaovao sy fitomboan'ny New Jersey
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny rongony any New Jersey
Te hanana fahazoan-dàlana any New Jersey?
FOMBA HAHAZOANA LISENY BUSINESS CANNABIS AO JERSEY Vaovao
Nifidy ny vahoaka tao New Jersey ary nisy lalàna iray vaovao momba ny fampanjariana rongony! - Miomàna hahazo ny anao orinasa cannabis fahazoan-dàlana hanombohana miasa ao New Jersey.
Avy hatrany dia nahazo lalàna vaovao i New Jersey hamantarana ny vatom-bahoaka. Ny fanontaniana 1 dia nandany tamin'ny 66.91% ny vato. Misokatra ny tsenan'ny rongony any amin'ny fanjakana, anjaranao ny manomboka manomana ny fangatahana fahazoan-dàlana hanokatra ny orinasanao rongony.
Ny indostrian'ny rongony dia tena miova tokoa raha ny momba ny fitsipiny, tsy maningana i New Jersey. Mbola misy ny fandrafetana ny lalàna ary maro ny antsipiriany lehibe tokony ho faritana, noho izany dia afaka manantena fanavaozam-baovao maro momba ny fanaovan-dalàna any New Jersey isika afaka volana vitsivitsy.
FIVAVAHANA MISY: NEW JERSEY MARIJUANA
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HAHAZOANA NY LICENSE MICROBUSINESS JERSEY Vaovao anao
Rahoviana no misokatra ny fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa rongony any New Jersey
Ity fanitsiana ity dia manan-kery amin'ny 1 Janoary 2021. Ny Vaomiera mifehy ny rongony, rehefa tafatsangana, dia afaka mamorona lalàna fanampiny hanatanterahana ny voalazan'ny fanitsiana.
Karazana fahazoan-dàlana hampiasa rongony hampiasaina any New Jersey
Fahazoan-dàlana amin'ny Microgrower any New Jersey
Azonao atao ny mangataka karazana lisansa microgrower raha:
Mampiasà mpiasa tsy mihoatra ny 10;
Mampiasà orinasa rongony mitazona faritra tsy mihoatra ny 2,500 metatra toradroa, ary raha misy mpamboly rongony dia hamboly rongony amin'ny faritra tsy mihoatra ny 2,500 metatra toradroa refesina amin'ny fiaramanidina marindrano ary mitombo eo ambonin'ny fiaramanidina tsy mihoatra ny 24 metatra ;
Aza manana mihoatra ny 1,000 ny zava-maniry rongony isam-bolana, afa-tsy ny fananan'ny mpizara rongony ny rongony ho an'ny fitaterana dia tsy iharan'izany fetra izany;
Mahazoa sy manodina isam-bolana, raha misy mpitrandraka rongony, tsy mihoatra ny 1,000 XNUMX pounds ny rongony amin'ny endrika maina;
Mahazo amidy indray isam-bolana, raha ny mpivarotra rongony dia tsy mihoatra ny 1,000 XNUMX pounds ny rongony amin'ny endrika maina, na ny vola mitovy aminy amin'ny endrika hafa, na izay mitambatra ao aminy; ary
Mahazoa amidy antsinjarany isam-bolana, raha ny mpivarotra rongony dia tsy mihoatra ny 1,000 XNUMX pounds ny rongony amin'ny endrika maina, na ny vola mitovy aminy amin'ny endrika hafa, na izay mitambatra ao aminy.
Inona ny isan'ny fahazoan-dàlana ara-barotra avela amin'ny indostrian'ny Cannabis any New Jersey?
New Jersey dia tsy nametraka lisansa voafetra manerana ny fanjakana, mifanohitra amin'ny fanjakana maro any Etazonia toa an'i Illinois sy Arizona.
Na dia tsy manana fetran'ny fanjakana manerana ny isan'ny fahazoan-dàlana ekena ho an'ny orinasa ampiasan'ny olon-dehibe aza izany dia avelao ny tanàna hilazana fa afaka mifehy ny isany avy izy ireo.
Hetra any New Jersey ho an'ny rongony
Ny haba marijuana NJ dia hampihatra ny hetra amin'ny varotra an'ny fanjakana 6.625% amin'ny rongony fialamboly, voarara ny haba amin'ny fanjakana.
Na izany aza, ny governemanta eo an-toerana dia afaka mandray didim-panjakana hametraka hetra ara-bola fanampiny amin'ny fivarotana, na karazana famindrana hafa, rongony na vokatra namboarina na anisan'izany ny rongony.
Ity hetra monisipaly ity dia mety hatramin'ny 2% amin'ny rongony fialamboly.
Ahoana no ahafahako manomboka manomana ny fampiharana rongony
Voalohany indrindra aloha ilainao ny drafi-piasana cannabis mety. Ao anatin'ny programa dia hazavainao hoe karazana dispensary inona no tianao hosokafana, mandra-pahoviana no kasainao hiasa any New Jersey, ary inona ny hevi-dehibe ao amin'ny orinasanao.
Rehefa mangataka fahazoan-dàlana rongony any New Jersey na fanjakana hafa, ny ampahany lehibe amin'ny fizotrany dia ny manaraka ny lalàna mifehy ny taratasy fangatahana. Hendry foana ny manatona mpisolovava momba ny lalàna mifehy amin'ny fanjakana manokana.
Te hangataka fahazoan-dàlana any New Jersey?
Ity ny fanontaniam-bahoaka any New Jersey 1:
Hevitra lehibe momba an'i New Jersey Fanontaniana ampahibemaso 1
Faktiora New Jersey A21/S21 voatsikera mafy noho ny tsy fisian'ny fitovian-jo ara-tsosialy. Amin'ny alàlan'ny A21 / S21 dia tsy misy fizarana hetra ho an'ny famerenam-bola ho an'ny vondrom-piarahamonina, tsy misy fivoahana mandeha ho azy, tsy misy famaritana ny «equity» na fanondroana ny fahazoan-dàlana, tsy misy fanitarana lisansa ny programa mmj, tsy misy trano mitombo.
New Jersey dia iray amin'ireo fanjakana telo voalohany nisamborana rongony. Miaraka amin'ny lalàna mbola tsy feno na lany. Mety tsy hitranga any New Jersey mandritra ny herintaona mahery ny fahazoan-dàlana. Antsoy amin'izay ny solontenanao ary lazao izy ireo mba hanohana tsena misokatra.
Mitombo ny trano any NJ?
Ho tapa-kevitra - hatreto tsia.
Equity ara-tsosialy ao amin'ny Lalàn'i Cannabis NJ?
Expungement? Ho tapa-kevitra
Famaritana ara-tsosialy? Ho tapa-kevitra
Ampahany amin'ny hetra natokana ho an'ny fiarahamonina? Ho tapa-kevitra
Tsy mbola voafaritra hatreto ny zavatra voafaritra hatreto, koa araho ny fanavaozana ny lalàna momba ny rongony any NJ.
Fitsipika momba ny fananana rongony any NJ